वाम गठबन्धन कार्यदलको पहिलो बैठक सकियो, के के भए निर्णय ? – Pahilo Page
वाम गठबन्धन कार्यदलको पहिलो बैठक सकियो, के के भए निर्णय ?
काठमाण्डौं । वाम गठबन्धनको संयुक्त कार्यदलले औपचारिक रुपमा आफ्नो कार्य सुरु गरेको छ । एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकमा राष्ट्रियसभाका साझा उम्मेदवार र प्रदेश सरकारको प्रारम्भिक खाकालगायतका विषयमा सामान्य छलफल मात्र भएको कार्यदल संयोजक एवं एमाले नेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए ।
कार्यदलले सहमति जुटाएका विषय एकता संयोजन समितिमा बुझाउने छ । पार्टी एकता प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको दावी गर्दै आएको वाम गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनअघि नै पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : शुक्रवार, पौष २८, २०७४ समय : १६:००:४८ 147 पटक पढिएको